Reggae na! Nchekwa njem nlegharị anya nke Jamaica n'agbanyeghị iwu ọhụrụ na -abịa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Reggae na! Nchekwa njem nlegharị anya nke Jamaica n'agbanyeghị iwu ọhụrụ na -abịa
Na-agbasa News Travel • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Site na ụfọdụ ebe ntụrụndụ kacha mma na ụwa niile dịka Sandals na osimiri, a na -atụ anya na njem nlegharị anya na Jamaica ga -eto n'agbanyeghị agbanyeghị iwu mgbede ọ bụ PM PM Jamaica Michael Holness kwupụtara taa.
Tụnyere nke United States mgbasa COVID-19, ọnụọgụ ọnwụ, Jamaica na-eme nke ọma. Onu ogugu onu ogugu mmadu Jamaica no na onodu 123 n'ime uwa, ma e jiri ya tụnyere post post nke 14 nke USA.
Jamaica achịala opekata mpe 369,960 were ọgwụ mgbochi COVID ruo ugbu a. Na -eche na onye ọ bụla chọrọ usoro onunu ogwu 2, nke ahụ ezuola ịgba ọgwụ mgbochi 6.3% nke onu ogugu obodo. Nke a bụ ọnụọgụ dị ala ma e jiri ya tụnyere ihe karịrị 50% maka USA.
N'ime izu gara aga kọrọ, Jamaica ruru ihe ruru Enyere 4,933 doses kwa ụbọchị. Na nke ahụ, ọ ga -aga n'ihu 120 ụbọchị iji nye ọgwụ zuru ezu maka 10% ọzọ nke ndị mmadụ.
Ọ bụ ezie na oke ka ghe oghe n'oge ahụ, na njem nlegharị anya alọghachitela na obodo agwaetiti Caribbean a, etinyere usoro iwu mgbochi malite na Ọgọst 11 ruo Ọgọst 31.
Dị ka ọ na-eyi egwu, nke a nwere ike ọ gaghị abụ nnukwu ihe dị iche maka ndị ọbịa na-ekpori ndụ ezumike Jamaica n'ọtụtụ ebe ntụrụndụ niile. akpụkpọ ụkwụ, mana ọ bụ ịdọ aka na ntị doro anya nke Prime Minista Jamaica Michael Holness, na iyi egwu COVID-19 dị adị na a na-elebara ya anya.
Ngalaba Steeti US na -agba ndị America na -ezumike na Jamaica ume ka ha gbaa ọgwụ mgbochi tupu ha eme njem.
Centlọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa US (CDC) ewepụtala Ahụike njem 3 Rịba ama maka Jamaica n'ihi COVID-19, na-egosi ọkwa dị elu nke COVID-19 na mba ahụ. Ọ na-ekwu, sị: “Ihe ize ndụ gị nke ibute COVID-19 yana ibute ọrịa siri ike nwere ike belata ma ọ bụrụ na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa FDA kwadoro ọgwụ mgbochi. “
Taa Prime Minista Jamaica Andrew Holness ekwuputala idegharị usoro Covid-19 n'okpuru Iwu Njikwa Ọdachi.
Mgbe ọ na-ekwu okwu na nnọkọ mgbasa ozi dijitalụ taa, Holness kwuru na usoro ọhụrụ a ga-emetụta oge izu atọ site na Wenezde, Ọgọst 11 ruo Ọgọst 31.
Ọ mara ọkwa na malite na Ọgọstụ 11, oge ị ga -eji na -alọta abalị ga -amalite site na elekere asaa nke ụtụtụ ruo elekere ise nke ụtụtụ site na Mọnde ruo Fraịde.
#Agbamakwụkwọ - Agaghị enwe ihe karịrị mmadụ 50 ịbịa agbamakwụkwọ n'ụzọ anụ ahụ.
Maka nzukọ kwa afọ na nke pụrụ iche nke ụlọ ọrụ, ọnụ ọgụgụ kachasị nke ndị enyere ikike ịga anụ ahụ bụ 50. pic.twitter.com/So7oDMOCUe
Na Sọnde, oge a ga -eji na -alọta ga -amalite site n'elekere isii nke ụtụtụ ruo elekere ise nke ụtụtụ na -esote, ebe na Sọnde, iwu ịlọta ga -amalite site n'elekere abụọ nke ụtụtụ ruo elekere ise nke ụtụtụ na -esote.
A ga -achọ ka ụlọ ọrụ mechie otu elekere tupu oge ọ ga -abịa.
Prime Minister na -ekpughere usoro ndị ọzọ ugbu a.
Kemgbe Tọzdee gara aga, ọnụọgụ COVID-19 kwa ụbọchị akarịala 200, na ụbọchị atọ, ọ ruru ikpe 300. A na -enwekwa nrụgide n'ụlọ ọgwụ dị ka oghere akwa nwere oke.
Tupu mgbe ahụ, Holness sere foto dị njọ nke Jamaica COVID-19 site na ịkọwapụta na edere ikpe 1,903 ọhụrụ n'etiti August 1 na August 8.
N'ihi nke a, a na -edekọ ikpe 238 COVID kwa ụbọchị.
Holness tara ụta maka ịrị elu ndị Jamaica na-agbasoghị ụkpụrụ COVID-19, gụnyere ịdọpụ uche ọha na eze na irube isi na usoro ịlọta.
Ọ sịrị, "ụdị omume a ga -ebute ịrị elu n'okwu ikpe," ka o kwuru, na -arịba ama na Gọọmentị tụrụ anya ịrị elu na ikpe, na -ebute mmụba nke njigide nje.
eTurboNews gbatara aka na Hon. Onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya Edmund Bartlett maka nkọwa, mana enweghị ike ịza ya, ọ ga -emelitekwa ozugbo amara ya.
Ọ dịghị onye nwere nchekwa ruo mgbe anyị nwere nchekwa abụghị naanị nyocha nke Onye isi ala US Biden, kamakwa Edmund Bartlett, onye minista njem nlegharị anya nke Jamaica. O kwenyesiri ike na nkesa ọgwụ mgbochi ọrịa zuru ụwa ọnụ nye onye ọ bụla bụ isi. Maazị Bartlett na -alụ ọgụ maka mwepu nke mba kpọmkwem na njem njem na njem, dị ka Jamaica na enweghị ike ịbawanye nkesa ọgwụ mgbochi.
Onye kacha asọpụrụ Andrew Michael Holness bụ onye mbụ a họpụtara ka ọ bụrụ onye otu omeiwu (MP) ka ọ nọchite anya mpaghara Constantency nke West Central St. Andrew na 1997, mgbe ọ dị afọ 25. Ugbu a n'ọkwa nke anọ ya dị ka onye omebe iwu, Maazị Holness ghọrọ onye itoolu nke Jamaica. Onye isi ala mgbe Jamaica Labour Party meriri ndị mmadụ National Party na ntuli aka na February 25, 2016.